Waxyaabo Ku Saabsan Kaneecada
Sunday July 18, 2021 - 10:39:49 in Articles by Xaaji Faysal
Luuqada ingiriisida waxaa loog yeedhaa (Mosquito), Carabidana (البعوض). Afka Soomaaligana Kaneeco
Waxay kamid tahay xayawaannada leh dhiigga qabow (Cold blooded), jidhkeeda waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood madax, uurku jir iyo qaar danbe. Kaneecadu waxay ka mid tahay cayayaannada uu alle Qur'aanka ku sheegay, waxay leedahay mucjisooyin badan oo wakhtiyadan danbe la ogaaday. Waxaa ka mid ah in ay madawga wax ka dhex arki karto iyo inay uriso qofka ay rabto in ay qaniinto. Kaneecadu waxay noocyada dhiigaga dadka ugu jeceshahay O-da, inkastoo ay iyagana jeceshahay dhiigagga B-da, iyo AB-da.
Qaniinyada kaneecada waxaa laga qaadaa xanuuno badan sida xanuunka qandhada iyo duumada, siday sheegtay hay'adda caafimaadka adduunku kaneecadu waxay kaalinta hore kaga jirtaa xayawaannada adduunka ugu saamaynta badan xagga dhimashada dadka. Kaneecadu waxay beedkeeda dhigataa meelaha ay biyuhu fadhiistaan, waxayna dadkeenu ku shubaan gaas ama naafato si ay ugxanta halkaas ugu dilaan. Ugu danbayntii kaneecada lama dabar go'ayn karo balse waa laga foojignaan karaa ama la yarayn karaa.